ဥပဒေနားလည်သူများ ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဥပဒေနားလည်သူများ ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။
Posted by uzin on Jul 12, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မည်မျှရှိသနည်း။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မိမိနှစ်သက်သော ဘာသာတရားအဆုံးအမကို နှစ်သက်သလိုကိုးကွယ်နိုင်ပြီး၊ မနှစ်သက်ပါကလည်း ထိုဘာသာတို့ကို မယူဘဲ မိမိယုံကြည်လေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အဆုံးအမအတိုင်းရော နေလို့ မရဘူးလား ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မိုးကုတ်၊ ကျောက်သင်္ဘော၊ ကြောင်ပန်း၊ မိုးပြာ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ စသည်တို့ကို အဓမ္မဟု သတ်မှတ်ထားတာကိုမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်က နှစ်သက်၍ မိမိဘ၀ လမ်းညွှန်အဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးလျှင် အဘယ်သို့သော ဥပဒေနှင့်ညှိစွန်းပြီး ပြစ်ဒဏ်မည်မျှ ချမှတ်နိုင်သလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။
အမြင်ကပ်သော ဥပဒေနှင့် ငြိစွမ်းပြီး ပါးစပ်ထဲတွင် ရှိသမျှ အပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်နိုင်ပါသည်။။
မိုးကုတ် ကို အဓမ္မ၀ါဒလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး..။
မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆရကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်…။
မိုးကုတ်တရားစာအုပ်/တရားဟောပြောချက်များတွင် သံဃာယနာတင် ထေရ၀ါဒကျမ်းများနှင့် ကွဲလွဲချက် အနည်းငယ်စီမျှရှိသဖြင့် ၄င်းတို့ကို လိုအပ်သလို ပြုပြင် ဖြည့်စွက် နှုတ်ပယ်စေခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါဟာလဲ မိုးကုတ်သာသနာဟာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးထွန်းကားတဲ့ သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက် အကျအပေါက် ကင်းစင်စေလိုလို့သာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မိုးကုတ်တရားတွေက ဟောတရားတွေကို အခြေခံတာဆိုတော့
နှုတ်နဲ့ဟောရာမှာ အနည်းငယ်မျှ လို/ပို တာတွေရှိပါတယ်။
ဒါတောင် နှုတ်ဟောတရားတွေမှာဖြင့် မိုးကုတ်တရားတွေက အသန့်စင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဆရာတော်များ အခြားသာသနာများမှာ အများကြီးပိုပြီး အမှားအယွင်းရှိတတ်ပါတယ်။
ဦးဦးပါလေရာက ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်နေတာပဲနော့ . .. ။
မိုးကုတ်တရားတွေက အသန့်စင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် . . .
မဟာစည်တပည့်တွေကလည်း မဟာစည်တရား အသန့်ဆုံးလို့ပြောမှာပဲဗျ။
ကိုယ်သမီးကိုယ် သိပ်သန့်တယ်ထင်နေရင်တော့ ဆေးစစ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ဓမ္မသိပ်စစ်တယ်ထင်ရင် တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ စစ်ကြည့်။
အနော် ဘာမှမသိလို့ ဘာမှ မမန့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲမန့်ခဲ့ပါတယ်နော်…အဟိ
မွတ်စလင်၊ ခရစ်ယန်၊ ကက်သလစ် ဆိုပြီးအဓိကဘာသာကြီးတွေ က သာဿနာအနေနဲ့ တည်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဝါဒဟာ ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပြီး သာဿနာဆိုတဲ့ကိစ္စက သံဃာယနာတင်ကာမှပေါ်ပေါက်လာပုံရပါတယ်။ ဂေါတမက church ဆိုတဲ့ပညတ်ကိုသတ်မှတ်တယ်လို့မကြားမိတာမို့၊ ဗုဒ္ဓသာဿနာဆိုတဲ့အယူအဆကို လက်ခံရဘို့ခက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမှာ မွတ်စလင်၊ ကက်သလစ်၊ ခရစ်ယန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဆိုပြီးပေါ်လာပုံရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ရှိမရှိဆိုတာ ကိုမေးရင်၊ မရှိဘူးလို့ဖြေရပါမယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာလူမျိုးလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇောင်းမကျန် နားလည်၊ လက်ခံယုံကြည်နေကြတာက မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ အဘိဓမ္မာကိုအခြေခံပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုသာမျက်မှောက်ပြုတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်အခြေခံတဲ့ ရှေးရိုးထေရ၀ါဒမူဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမနည်းရှာရမဲ့ချိန်ခါရောက်နေကြောင်းပါ။
လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ မိုးပြာအပါအ၀င် အယူအဆသစ်တွေဟာ မူရင်းအဘိဓမ္မာရဲ့ပြဆိုချက်ကနေခွဲထွက်တဲ့ hybrid အယူအဆသစ်တွေမို့၊ နားမလည်ကြသူတွေအတွက် မက်လောက်စရာဖြစ်တာမဆန်းပါဘူး။
မောင်မိုးညိုတို့အားလုံး နားလည်ထားသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓကဟောသမျှတရားတွေက၊ သူကဖန်တီးတည်ထွင်ထားခဲ့တာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘဲ၊ လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖြစ်ပျက်တရားတွေအားလုံကို သစ္စာ(၄)ပါးနဲ့ချုပ်ပြီး ရှင်းပြခဲ့တာပါဘဲ။
ကျွန်တော်ထင်တာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည့်ခွင့်ကတော့ ပေးထားပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာရှိနေတဲ့ ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့
ဥပဒေကို ကျောခိုင်းပြီး လုပ်နေရတာ..ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေကို လေးစားတာထက် လူကိုလေးစား
တာက ဘ၀ပိုလုံခြုံတယ် ဆိုပြီး လူတွေကိုဘဲလိုက်ပြီး ဖားယားလုပ်နေကြတာကို တွေ့နေရပါကြောင်း?…
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက အကောင်အထည်ဖော် လိုက်နာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုက သာသာနာရေးကိစ္စဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ မျှတစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံရှိ ဘာသာသာသနာအားလုံးရဲ့ ၀န်ကြီးဌာနဖြစ်ရဲ့လား။
သာသနာရေးဌာနမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကြည့်လိုက်ရင် ဘုန်းကြီးလူထွက်တွေကိုပဲ အပြင်မှာ အလုပ်မရှိလို့ ခေါ်ခန့်ထားရသလိုဖြစ်နေတာတွေ့နေလို့ပါ။
အခုတော့ ကြားသိနေရတာတွေက ဘာသာတရားအားလုံးအပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒဘုန်ကြီးလူထွက်တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သာသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခြယ်လှယ်နေတာသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို မျှတစွာ အကောင်းအထည်ဖော်ပေးနိုင်သော ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်သည့် သာသနာရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ko speaker ခင်ဗျာ . .
တကယ်ကတော့ ဘာသာရေးကိစ္စများတွင် သူ့သက်ဆိုင်ရာ သာသာရေးခေါင်းဆောင်များရှိနေကြပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာသာသနာအလိုက် ကိုယ့်ခေါင်ဆောင်နဲ့ကိုယ် အုပ်ချုပ်နေကြရင် လုံလောက်နေပါပြီ။
အဲဒါကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီး ဌာနပိုကြီးတစ်ခု ဖွဲ့လိုက်တော့ ဘာသာ သာသနာတွေအရေးတွေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ လွပ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေကြရတာဟာ ဌာနပို သာသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ထားခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆပါသည်။
မိုးကုတ်က .. အဓမ္မ၀ါဒီလား … ဘယ်သူသတ်မှတ်ခဲ့တာလဲမသိဘူးနော် …. ။
ကျွန်မတို့ အဖိုးဖွားတွေ လက်ထပ်ကတည်းက …. အားထုတ်လာတဲ့ ၀ိပသနာ … ၊ ယခုလက်ရှိလဲ စခန်းတွေအများကြီးခွဲဖွင့်ထားတာ …. ဘာလို့ အဓမ္မဖြစ်ရမှာလဲဟင် … ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကို အဓမ္မလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ မဟနအဖွဲ့တွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
တစ်စုမှ လုံးဝအဓမ္မသတ်မှတ်ရေးဆိုတဲ့ အစုနဲ့
တစ်စုက ယခုအချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးကုတ်ရိပ်သာတွေ အင်အားကြီးထားနေတာမို့
လုံးဝ အဓမ္မသတ်မှတ်လိုက်ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာများဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်
တရားအားလုံးကို အဓမ္မဟု မသတ်မှတ်ပဲ
သူတို့သဘောမကျသော တရားများကို အဓမ္မအဖြစ်သတ်မှတ်၍ ပြင်ဆင်ပေးရန်၊ ဖြုတ်ပေးရန် တို့ဖြင့်သာ ညှိုနှိုင်းလိုက်ကြပေသည်။
မိုးကုတ်အဖွဲ့က ကမ္ဘာအထိ အင်အားကြီးထွားနေလို့သာ လုံးဝအဓမ္မဟု မသတ်မှတ်ရဲကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အင်အားသေးသော အဖွဲ့ဖြစ်နေပါက လုံးဝအဓမ္မဟု မတရားသတ်မှတ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလည်း မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားများထဲမှ သူတို့သဘောမကျသော တရားများကို ပြင်ဆင်၊ ဖြုတ်နှုက်၊ ဖြည့်စွတ်ခိုင်းတာကိုက မိုးကုတ်တရားအားလုံးကို အသစ်ပြန်ပြင်ခိုင်းသလိုဖြစ်နေပါသည်။
နားလှည့် ပါးရိုက်သလိုနဲ့ အဓမ္မဟု သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ ပြင်ဆင်၊ ဖြုတ်နှုက်၊ ဖြည့်စွတ်ခိုင်းသော တရားများသည် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏
တရားတော်တော်များများတွင် ရာခိုင်နှုံးတော်တော်များများပါနေခြင်းကြောင့် ထုံးအိုးထဲသို့ နှစ်ခိုင်းသလိုမျိုးဖြစ်နေပါသည် etone ခင်ဗျာ။
တကယ်တော့ ဝိပဿနာအကျင့် ပြုဖွယ်ကိစ္စ ပြီးဆုံးသွားသူများ တရားပြတဲ့အခါ ဓမ္မပရမတ်သစ္စာကို ပညတ်တင်ပြီး ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ ရှင်းပြတဲ့အခါ ပိဋကတ်စာကို အသေဆုပ်ကိုင်သူများနဲ့ ဝိရောဓိဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မိုးကုတ်တင်မက သဲအင်းဂူ၊ စွန်းလွန်း၊ လယ်တီ စတဲ့ဆရာတော်ကြီးများလည်း သူ့ခေတ်သူ့ကာလအလျောက် ပရိယတ်စာသန်သူများရဲ့ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ လူသေလူဖြစ်ရှင်ဥက္ကဌ၊ မိုးပြားဂိုဏ်းလိုမျိုးတွေရဲ့ လက်ညှိုးထောက်ပြခြင်း ခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မြတ်စွာဘုရားက ဂိုဏ်းဂဏအုပ်စုမဖွဲ့ဖို့ တားမြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါမယ်။
တကယ်တော့ ဓမ္မသဘောကို ပရိယတ္တိစာပေနဲ့ပညတ်တင်၊ ပရမတ်ရှုဒေါင့်မှသုံးသပ်၊ အရိယာသစ္စာဆိုပီး အမည်ပေး…ဘာလုပ်လုပ် နားလည်မှုလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူရှင်းရှင်း မူလအဓိပ္ပါယ် မထွက်ပါဘူး။ ရှင်းပြသူတင်မက နားထောင်သူရဲ့ ညဏ်ရှိ ပါရမီဘုန်းကံအပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။ တကယ်ကျင့်ကြံ ပြီးဆုံးသူများကြတော့ ဒါတွေငြင်းခုန်ဖို့ စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အတိတ်ဆုတောင်းပါလာရင်တော့ ဆိုင်ရာဝေနေယျများအတွက် ပြန်ကြည့်ပေးရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အတုအယောင် အင်ဂုလိများ ပူးသတ်ဝင်လာပြန်ရော။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်း ထေရ၀ါဒ အဌကထာတွေကိုပဲ ပြန်ကိုးကားနေရတာမို့
ကိုင်တွယ်တဲ့ ပေတံလွဲနေရင်လည်း ဓမ္မပါ လွဲနေတတ်ပါတယ်။
ယနေ့ထေရ၀ါဒတရားများ ပေတံကိုက် မကိုက်ကို
http://myanmargazette.net/67522/atheism-agnosticism-buddhism-christianity-hinduism-islam-judaism-new-age-pagan-earth-based-religions-religious-concepts-self-help-spirituality-wicca-witchcraft-religion-spiritualit/buddhist-buddhism-asia-theravada-mahayana-zen “အမည်ခံထေရ၀ါဒမှ တကယ့်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသို့
” မှာ လေ့လာကြည့်ပါ။
မအီးတုံရေ.. မိုးကုတ်ကို အဓမ္မလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆယ ဆိုပြီး မိုးကုတ်တရားရဲ့ အမှားတွေကို ထောက်ပြထားတာ…နောင် အဲဒီလိုမပြောဖို့တားထားတွေတော့ရှိပါတယ်။
အမှန်အမှားက… ဒီနေ့မှာတော့ ….အင်အားနဲ့လဲ ဆိုင်ပြီးနေပါတယ်…………………………….
ဥပဒေကိုလေးစားတာက မလုံခြုံဘူး… လူကိုလေးစားတာက လုံခြုံတယ်တဲ့။ သိပ်မှားပေမယ့် သိပ်ကောင်းတယ်။
ဘိန်းစားတွေ ပပျောက်ဘို့ ဘိန်းစစ်ဆင်ရေးတွေ မူးယစ် ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးတွေလုပ်ကြတယ် ။
ဘိန်းစားတွေက လူတွေကို ဘယ်လိုဒုက္ခပေးလို့လဲ..။
အဓိက ဘိန်းစားတွေရဲ့ ဘဝ လူမှုရေး စတာတွေ ပျက်စီးတာကို ကယ်တင်ချင်တယ်မဟုတ်လား ။
အဲလို ဘိန်းစားတွေရှိသလို အရက်သမားတွေလဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား ။
အရက်သမားတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ကော ကယ်တင်ဘို့အတွက် အရက်ဆိုင်တွေ အရက်ချက်စက်ရုံတွေ ကို
ကန့်ကွက် ဖျက်ဆီး ဘို့ ဘယ်သူမှ မကြိုးစားကြတာ ..ဘာလို့လဲ…
ဘိန်းစားကလဲ အရက်သမားတွေလိုဘဲ လူတွေကို အကျိုးမပြု ဒုက္ခ မပေး..သူတို့ကြိုက်တာသူတို့လုပ်နေကြတာ..
ဒါပေမဲ့ ဘိန်းစားကတော့ နှိပ်ကွပ်ခံရပြီး အရက်သမားကတော့ လူရာသွင်း ချီးယာ့စ် ဆိုပြီး နေရာယူနေတာ..။
ပြောလိုက်ရင် သူတို့မှာ ခိုင်လုံတဲ့ ဆင်ခြေတွေရှိနေတာ.. တွေးကြည့်ပါ ဘိန်းစားနဲ့ အရက်သမား မကွာလှပါဘူး ..အတူတူလို့ပြောလို့ရပါတယ် ။
ရလာဒ် က မတူပါ..။
ဘာသာတစ်ခုကနေ အခြားဘာသာတစ်ခုကို (သို့မဟုတ်) အယူဝါဒတစ်ခုကနေ အခြားအယူဝါဒတစ်ခုကို
ဝေဖန်သုံးသပ်ပြောရရင် ကိုယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ မဟုတ်တဲ့ဘာသာကို အယူမှားတယ်လို့ ပြောမှာပါဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာက ခရဇ်ယာန်ဘာသာတွေ၊ မူဆလင်ဘာသာတွေကို အယူမှားတယ်ပြောသလို၊အဲဒီ ခရဇ်ယန်တွေ၊ မူဆလင်တွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို အယူမှားလို့ပြောမှာပါဘဲ၊ ဒီလိုပါဘဲ ထေရ၀ါဒက
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒကို အယူမှားလို့ပြောသလို ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒကလည်း ထေရ၀ါဒကို အယူမှားလို့ပြောမှပေါ့။
ဒါဟာအပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှု့သဘော တရားပါဘဲ။
ဒါကြောင့် ဘာသာရေးဟားငြင်းကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဖူးလို့ လူကြီးတွေပြောကြတာပါ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ပြီး ကိုယ့်ကျင့်မှ ကိုယ်ရမှာပါလို့ဘဲ ဆွေးနွေးပါရစေ။
ဝါဒတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။ ဝါဒကင်းအောင်နေနိုင်၊ ကျင့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရှည်ကြီးပါ။ အဲသာကြောင့် ပြောတော့ဘူး။
ဥပဒေ တော့ နားမလည်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မိုးကုတ်၊ ကျောက်သင်္ဘော၊ ကြောင်ပန်း၊ မိုးပြာ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ စသည်တို့ကို အဓမ္မဟု သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုတာ အခြေခံ ဥပဒေ မှာ မပါ ပါဘူး လို့ ထင် တာပဲ။
မဟနဆိုတာ.. တရားဥပဒေအထက်မှာရှိနေတာ.. သတိမထားမိကြဘူးထင်တယ်..
အဲ..အဲ.. သတိပြုမိဖို့တောင် စိတ်ထဲမထည့်ရဲကြဘူးဖြစ်နေတာ..
တော်ကြာ.. ဘုံသွားလက်မှတ်သိမ်းပြီး.. ငရဲပို့လိုက်ရင်.. ဘယ်နှာလုပ်ကြမလည်း.. :?
ကျုပ်ကတော့ သမ္မာ သမတ်ကျစွာ အလယ်ဂေါင်ဂျားဂနေပြောလိုဒါဂတော့
မမြင်ဘူးတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကို ယုံကြည်သူခြင်းအတူတူ
၀င်ရောက်မှတ်ချက်ပြုသူတို့ရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်များကို သိရှိရတဲ့အတွက် များစွာ ကြည်နူးမိပါတယ်။ လူသားတို့ရဲ့ မူလအသိတရားသည် ဖိနှိပ်မှု၊ မတရားမှုတို့ကို မလိုလားသည်မှာ လူသားတိုင်းရဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် မသိမှု အ၀ိဇ္ဖာဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်လူတစ်စု၏ သိမ်းသွင်းပြောဆိုခြင်း တို့ခံရ၍ အမှန်တရားကို မမြင်တော့ဘဲ လွန်ကျူးမှု၊ မတရားမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းသည် အင်မတန် မကောင်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ပြောသလို မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သူခြင်းအတူတူ နည်းနည်းပါးပါး သက်ညာသင့်ကြောင်းပါ။
ဒီနေ့ ထေရ၀ါဒရဲ့ အကြီးအကဲဦးဆောင်ဆရာတော်များသည်လည်း သူတို့အတွက် အခွင့်သာသည် နိုင်ငံတွင်း မှာသာ သာသနာပြုရဲတာပါ။ ပါကစ္စတန်တို့ အာဖကန်တို့လို နိုင်ငံမျိုးကို သွားရောက် သာသနာပြုကြည့်ပါလား။ သူတို့တစ်တွေရဲ့ ဘုန်းတန်းခိုးကြီးမှု၊ သြဇာရှိမှု၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာရှိမှု အစစ်အမှန် ဟုတ်၊ မဟုတ် သိရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်ကတော့ ဒကာကယ်မလို့ ဆရာကြွပြီး တန်းခိုးထနေတာပါ။
ဒီဟာလေးကတော့ အမှန်ကို ပြန်ပြောမှ သင့်မယ်ထင်လို့ ထပ်ရှင်းပါမယ်..။
ကျုပ်က မိုးကုတ်တပြည့်လုံးလုံး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..။
မိုးကုတ်တပြည့်မို့ မိုးကုတ်တရားကို ကာကွယ်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး..။
(နှုတ်ဟောတရားတွေမှာဖြင့် မိုးကုတ်တရားတွေက အသန့်စင်ဆုံး) ဆိုတာက
နှုတ်နဲ့တရားဟောရာမှာ တရားသားမှအပ အခြားအကြောင်းအရာတွေ ထည့်မပြောတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီဟာကအမှန် ဟိုဟာကအမှား လို့လဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားလုပ်ပြီး အာမချောင်ပါဘူး..။
ကိုယ့်မျက်စေ့နဲ့ကြည့်၊ ကိုယ့်နားနဲ့နားထောင်၊ ကိုယ့်အသိဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီး
မိုးကုတ်တရားကို ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေ့လာ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်…
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ …ပြောချင်တာ ရှေ့ကဖြစ်ပျက် နောက်ကမဂ် ..အပျက်နဲ့ မဂ်ကိုက်အောင်ရှု့
တာ ၀ိပဿနာဆိုရင်… အဲဒီအပျက်နဲ့ မဂ် တစ်ထပ်တည်းကျသွားရင် ဘာမှ မသိတော့တာ ဖြစ်သွား
– နောက်တခု နိဗာန်ဆိုတာ အကြောင်းတရားကင်းတယ်တဲ့..ဘယ်သူမှ ပြုပြင်စီရင် လို့မရဘူး…
ရှေ့ကဖြစ်ပျက်နောက်ကမဂ်ဆိုရင် ..မဂ်ဖြစ်ဖို့ ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်..
ဒါဆိုရင် နိဗာန်မြင်ဖို့ ဖြစ်ပျက်ကို အရင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ ဖြစ်ပျက်မြင်တာက အကြောင်း..မဂ်ရတာ
က အကျိုးဆိုတော့ အကြောင်းတရားမကင်းဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်….နိဗာန်ဆိုတာ အကြောင်းကျိုး
– နောက်တခုက … ကံကြောင့်နာမ်ရုပ်…နာမ်ရုပ်ကြောင့်ကံ ဆိုရင်…ဥပမာ..
နာမ်ရုပ်ကို တည်ငြိမ်တဲ့ ရေပြင်လို့ပြောရင်… ကံရဲ့ ရိုက်ချက်ကို ဒီရေလိုင်းလို့ စဉ်းစားကြည့်မယ်..
ရေကြောင့် ရေလိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရေမရှိမှရတော့မယ်…
ရေမရှိအောင်လုပ်တာလည်း သဘာဝကို လွန်ဆန်သလိုဖြစ်သွားပြီ…ဒါကြောင့် ရေဆိုတဲ့ ရုပ်နာမ်ခနာ မရှိအောင်အားထုတ်..ဒီရုပ်နာမ်ကို အပြစ်မြင်လာတယ်..ရုပ်နာမ်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နေကြတယ်..
ရေလိုင်းဆိုတဲ့ ကံကို အပို၊အလို မရှိ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ရင် ရေဆိုတာကတော့
ဒါကြောင့် ရေပြင်ကြောင့်ရေလိုင်း..ရေလိုင်းကြောင့် ရေပြင်လို့ဖြစ်နေတယ်..
အမှန်တော့ ရေလိုင်းဖြစ်တာ ပြင်ပ ပယောဂ မြေငလျှင်ဆူနာမီကြောင့်လား?
အခုကံကို လုပ်တာလည်း အပ ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း…မိုးကုတ်ဆရာတော် အပေါ်ဆိုတဲ့ လူအပေါ်မှာ တောင်တင်နေကြ
ဦးမလား?…တရားဟုတ်မဟုတ် အပေါ်မှာ စစ်ဆေးကြမလား?
(ဘာသာတရားဆိုတာ လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတွက် မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနဲ့ လွတ်လပ်စွာ လေ့လါပါ ဆန်းစစ်ပါ ဘာသာပြောင်းတိုင်းလူမျိုးမပြောင်းနိုင်ပါ)
အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ်ကွာ။
(MYANMAR@BURMA) တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်-အလံပြောင်းတိုင်း တိုင်းပြည်ကပြောင်းမသွားပါဘူးကွာ။
သမ္မတကြီးက ဥပဒေဆိုတာ မည်သူ့အပေါ်မှမရှိပါတဲ့…….အခုမှလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွှေးတုန်းလေ။
ဆေးဟာ အတိုင်းအဆမှန်ရင် ရောဂါပျောက်ကင်းသလို
ဘာသာရေးကိုလည်း အတိုင်းအဆမှန် ကျင့်သုံးဆည်းကပ်ရင် လူကိုငြိမ်းအေးစေပါလိမ့်မယ်။
ဆေးကို အတိုင်းအဆလွန် သောက်သုံးမိရင် လူကို ဘေးဖြစ်စေသလို
ဘာသာရေးကိုလည်း အတိုင်းအဆလွန် အစွန်းရောက်ကိုးကွယ်မိရင်
လူကို မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ဖြစ်စေမှာပါပဲ။